China 2K Phezu Ukubumbela zomngundo abavelisi kunye nabathengisi Enuo Umngundo
Umbala obunjwe kabini, 2Kmold old:Iindidi ezimbini zezinto zeplastikhi zibunjiwe kumatshini omnye wokubumba, kwaye zibunjwe kwiindawo ezimbini, kodwa imveliso iyabumba kube kanye. Ngokubanzi, le nkqubo yokubumba ibizwa nangokuthikabini-izinto ziphene yokubumba, ihlala igqitywe siseti yokubumba, kwaye ifuna umatshini okhethekileyo wenaliti yokubumba.
Ngaphezulu-ekubumbeni ngumngundo:Iindidi ezimbini zezinto zeplastiki azinyanzelekanga ukuba zibunjwe kumatshini omnye wokubumba, kwaye zibunjwe kwiindawo ezimbini; emva kokuba imveliso ikhutshiwe kwiseti yokubumba, ibekwa kwenye iseti yokubumba ukubumba kwenaliti yesibini. Ke ngoko, ngokubanzi, le nkqubo yokubumba ihlala igqitywa ziiseti ezimbini zokubumba, ngaphandle kwesidingo semibala emibini ekhethekileyoUmatshini ziphene yokubumba.